राष्ट्र बैंकको नीति र सुधार | कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिक
राष्ट्र बैंकको नीति र सुधार
मिति: Thursday,2nd August 2012 23:14 PM
डा. युवराज खतिवडा गभर्नर नियुक्त भएलगत्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उद्योगी–व्यवसायीको लगानी हुन नहुने तथा उद्योगी–व्यवसायीलाई कुनै माग भए राख्न र जथाभावी सुझाव नदिन सुझाएका थिए । त्यसैक्रममा गभर्नर भएको साढे दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गरिसक्दा उद्योगी–व्यवसायीको लगानी रोक्नेबारे एकीकृत निर्देशन २०६९ मा केही बोल्न खोजेको हो कि भन्ने धेरैलाई लागेको पनि थियो । तर, गभर्नरको पछिल्लो स्पष्टिकरणले विषय वस्तुको गम्भीरतालाई बुझेर पनि बुझ पचाइएको देखिन्छ । गभर्नरले सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै व्यक्तिका नाममा गएका कर्जाहरूमा मात्रैसीमा लगाइएको बताएर आफैले जारी गरेको निर्देशन केही पनि होइन भन्ने सन्देश दिएका छन् । यसको अर्थ राष्ट्र बैंक आफूले ल्याएको निर्देशनप्रति अझै विश्वस्त हुन नसकेको प्रष्टिन्छ ।
जब कुनै निर्देशन एउटा व्यक्तिमा मात्र केन्द्रित हुन्छ त्यतिबेला त्यो निर्देशनको कुनै औचित्य हुँदैन । सञ्चालक तथा सीईओ व्यक्तिले नपाउने तर फर्म र कम्पनीले पाउने भन्ने कुराले व्यवसायी बैंकको लगानीकर्ता हुनुहुँदैन भन्ने मान्यतालाई सिधै लत्याएको देखिन्छ । जब व्यक्तिले नपाउने तर त्यही व्यक्ति र उसका परिवार संलग्न कम्पनी वा फर्मले विभिन्न प्रकृतिका व्यावसायिक कर्जा लिन पाउने भन्ने व्यवस्थाले समग्रमा के असर गर्ला र ? त्यसमाथि पनि कर्मचारीहरूका सन्दर्भमा हरेक कर्मचारीको ऋण लिने क्षमता संस्थामा काम गरेको आधारमा तय हुने कुरा हो र त्यसको बैंकले नै राम्रोसँग मूल्यांकन गरेको हुनुपर्छ ।
अहिले पनि त व्यक्तिगत रूपमा कति जनाको मात्रै सेयर होला र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम्पनीमार्फत काम गर्नुपर्छ भन्नेमा अधिकांश सहमत छन् र सोही अनुरूप अघि बढिरहेको भेटिन्छन् । व्यक्तिगत रूपमा किन कसैले जोखिम लिन्छ । आजसम्म कालोसूचीमा परेका विवरण मात्रै हे¥यौं भने पनि हुन्छ व्यक्तिका नाममा गएको कति ऋण खराबमा परिणत भएको छ । विगतमा कम्पनी सञ्चालनमा कठिनाइ महसुस गरी केहीले व्यक्तिगत कारोबार गरेका थिए । तर, पछिल्लो समय स्थिति यस्तो छैन । सबै व्यक्तिहरू कुनै न कुनै रूपमा कम्पनी खडा गरेर सोही अनुरूपको गतिविधि अघि बढाईरहेका छन् । त्यसैले वित्तीय क्षेत्रबाट उद्योगी–व्यवसायी हटाउने अभियान चलाउने हो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक रहेका व्यक्ति र उसका एकाघर परिवारकै सदस्यका नाममा भएका (साझेदारीमा खुलेका ठूला कम्पनीबाहेकका) कम्पनी र फर्ममा ऋण लगानी गरिनु हुँदैन । त्यसले मात्र वित्तीय क्षेत्रलाई उद्यमी–व्यवसायीबाट अलग राखेर अघि बढाउन सकिन्छ । गभर्नरको पछिल्लो स्पष्टीकरणले निर्देशनको मूल मर्मलाई मार्ने काम गरेको छ । नीति निर्देशनहरू आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू कहाँ कस्तो छ र त्यसको वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो असर पर्छ भन्ने अध्ययन गरेर होइन, कहाँ कसलाई कतिखेर के फुर्छ ? त्यही व्यक्तिगत लहडका भरमा आउने नीति निर्देशनले वित्तीय क्षेत्र सवलतातिर जाँदैन । यसले एकीकृत निर्देशन बनाउँदा अध्ययन गरेर नभई खल्तीबाट झिकेर वित्तीय क्षेत्रमा केही गरेजस्तो देखाउने प्रवृत्ति राम्रो होइन ।
फेरि सञ्चालक हुँदैमा व्यवसाय गर्नै नपाइने भन्ने पनि हुँदैन । त्यसमा केही स्वतन्त्रताको कुरा पनि होला । बन्द व्यापार गरेकै भरमा सञ्चालक हुन नपाइने हो भने वित्तीय क्षेत्रमा सञ्चालकहरूको स्तर वृद्धि गर्नुपर्दैन । खालि सामान्य बैठक भत्ताका भरमा सबै दायीत्व सञ्चालकले नै लिनुपर्छ र संस्था बिगार्ने सबै सञ्चालक हुन भन्ने मान्यतालाई राष्ट्र बैंकले चिर्न सक्नुपर्छ । त्यसअघि उनीहरूको न्यूनतम जीवनयापनको आधार तयार गर्नुपर्छ । बाहिरी मुलुकमा विशेषज्ञ सञ्चालकहरू संस्थाका लागि रातोदिन खटेका हुन्छन् र उनीहरूले त्यही किसिमले सुविधा पनि पाइरहेका हुन्छन् । हरेक संस्थामा न्यूनतम ५० प्रतिशतदेखि दुईतिहाइ सञ्चालक विशेषज्ञका रुपमा नियुक्त गरिएको हुन्छ । यसले सञ्चालकहरूको दायित्वलाई पनि विस्तार गर्न सघाउ पुग्छ र संस्थाहरू पनि स्वतन्त्र रूपले कसैको आग्रह पूर्वाग्रहमा नबसी काम गर्न सक्ने हुन्छन् । त्यसैले तत्काल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र भए पनि लगानीको आधारमा नभई काम गर्ने क्षमताका आधारमा विशेषज्ञ सञ्चालकहरूलाई जिम्मेवारी दिएर संस्था सञ्चालनमा जोड दिनु राष्ट्र बैंककै लागि पनि हितकर हुन्छ । थोरै मात्र लगानीकर्ताको तर्फबाट प्रतिनिधि र बढी स्वतन्त्र सञ्चालक हुँदा संस्थाहरू अझ पारदर्शी ढंगले अघि बढ्छन् । राष्ट्र बैंकले सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूलाई अर्को बैंक तथा वित्तीय वित्तीय संस्थासँग लिएको ऋणको विवरण एक घण्टाभित्र पठाउन निर्देशन दिएको कुराले वित्तीय क्षेत्र आतंकित बनेको छ । सोमबार दिउँसो २ बजे निर्देशन पठाउँदै तीन बजेभित्र सबै ऋणको विवरण पठाउन भनी दिइएको निर्देशन आफैंमा अव्यावहारिक छ । सो दिन जलविद्युत् कम्पनीको उद्घाटन (डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमेत उपस्थित) कार्यक्रममा उपस्थित सीईओहरू हतारिएर कार्यक्रमस्थलबाट बाहिरिएका थिए र तत्कालै अधिकांश सीईओले त्यसबारेको विवरण राष्ट्र बैंकमा बुझाएका थिए । निश्चित प्रयोजनका लागि एक घन्टाको पनि समय नदिई गरिने यस्ता हर्कतले वित्तीय क्षेत्रलाई आतंकित बनाउँछ । माग्नेबित्तिकै भएका विवरण दिनु उनीहरूको बाध्यता होला तर विवरण लिँदा हतासमा मानसिकतामा देखिनु नियामकका लागि लाजमर्दो कुरा हो । यसले बैंकिङ क्षेत्र पूरै निराश र हतास अवस्थामा पुग्छ । सबै बैंकरहरू हतास देखिनु बैंकिङ क्षेत्रका लागि राम्रो कुरा होइन ।
कुन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुन सीईओको ऋण लगानी कति छ भनेर जाँच गर्ने राष्ट्र बैंकको कदमलाई किमार्थ गलत भन्न सकिँदैन । तर, विनायोजना मागिने विवरणले उनीहरूलाई हतोत्साही बनाउने बाहेक अरू कुनै काम गर्दैन । राष्ट्र बैंकले कतिपय बेला अनौठा किसिमका क्रियाकलापहरू देखाउने गर्छ र त्यसको असर वित्तीय क्षेत्रमा पर्छ । व्यक्तिका लहडका भरमा गरिने यस्ता हर्कतले वित्तीय क्षेत्रलाई धराशायी बनाउन मद्दत गर्छ । जहाँबाट यस्तो कदम चालिएको भएपनि यसतर्फ उच्च व्यवस्थापनले विशेष ध्यान नदिए उनीहरूको बदनाम गर्न मातहतका निकाय क्रियाशील रहने वातावरण तयार हुनेछ ।
सुनसँग जोडिएका सत्य समस्याग्रस्त संस्था र केन्द्रीय बैंकको नीति रेमिट्यान्स र खाद्यान्न असुरक्षाको अन्तरसम्बन्ध बन्द–हड्तालको मारमा औद्योगिक क्षेत्र निकासी प्रवद्र्धनका लागि नगद अनुदान सहकारी संस्थाहरूलाई आयकर छुट सम्बन्धित सरकारी निकायको तथ्यांकअनुसार २०६९ साल पुस मसान्तसम्म नेपालमा जम्मा
जनक शिक्षाका तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक सिलवाल भ्रष्टाचारी ठहरविशेष अदालतले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका…